lulu: မွေးနေ့ အမှတ်တရ
at 5:40 PM Labels: အချိုပွဲ, အရည်သောက်, အသုပ်
မောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ ကျွန်မ ၃၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပါ။ မွေးနေ့မှာ ရုံးက လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေကို တစ်ခုခု လုပ်ကျွေးမယ်ဆိုပြီး အချိန်ကလည်း သိပ်မရတာမို့ အချိန်ယူပြီးချက်ပြုတ်ရတဲ့အစား အစာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ချက်ပြုတ်ရ လွယ်ကူပြီး စားလို့လည်း မြိန်စေမယ့် ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်လေးပဲ လုပ်ကျွေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်။ အရည်သောက်လေးကတော့ ဗူးသီးနဲ့ ကြာဇံဟင်းခါးလေးပေါ့နော်။ အချိုပွဲကတော့ ဆားငန်သီးကျောက်ကျောနဲ့ လက်ဘက်သုပ်လေးပေါ့နော်။
ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ (လူအယောက် ၂၅) စာအတွက် ပုန်းရည်ကြီး အနှစ်ထုပ် ၂ဝ ထုပ်၊ ဆန် တစ်ပြည်ကို ချက်ထားတဲ့ထမင်း၊ ဘဲဥအလုံး ၂၅၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်ကြော်၊ နှမ်းဆီ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ မန်ကျည်းနှစ် ခပ်ပျစ်ပျစ်တို့ပါနော်။
အသီးအရွက်အနေနဲ့ကတော့ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဂျူးမြစ်၊ မုန်လာဥနီနဲ့ ပင်စိမ်းတို့ပါနော်။
ပုန်းရည်ကြီးအနှစ်တွေကို ဇလုံတစ်လုံးထဲ ဖောက်ထည့်ပြီး ရေနွေးလက်ဘက်ရည်ပန်းကန်လုံး တစ်လုံး ထည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆားနဲ့ ဟင်းချိုမှုန့်ကို ထည့်ပြီး အားလုံးသမအောင် မွှေပေးပါတယ်။ ပြီးတော့မှ နှမ်းဆီ ၂၅ ကျပ်သားကို ထည့်ပြီး အားလုံး သမအောင်မွှေပြီး နှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပုန်းရည်ကြီးတွေက ခပ်ပျစ်ပျစ် အရည်လေးတွေလို ဖြစ်သွားပြီး ထမင်းနဲ့ နယ်လို့အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘဲဥတွေကိုတော့ ဟတ်ဖရိုက်ကြော်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် ထပ်ကြော်ထားပါတယ်။ အသီးအရွက်အနေနဲ့ ထည့်စားဖို့အတွက် ဂျူးမြစ်ကို ရေများများနဲ့ သေချာဆေးပြီး ရေစိမ်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ခေါင်းဖြတ်၊ အမြစ်တွေကို ကပ်ကျေးလေးနဲ့ သေချာဖြတ်ပြီးတော့မှ ရေထပ်ဆေးပါတယ်။ ပြီးရင် ပင်စိမ်းရွက်ကို သဲတွေစင်အောင် သေချာ ရေနဲ့ ဆေးပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အညွန့် အရွက်လေးတွေကို တစ်လုပ်စာ အရွယ်လေးတွေ ရအောင် ဖြတ်ထားပါတယ်။ မုန်လာဥနီကိုလည်း ရေဆေး၊ အခွံနွှာပြီး အပွင့်ဖော်တဲ့ဟာကို ဖော်ပါတယ်။ အရှည်လိုက်လေးတွေလည်း ဖြတ်ထားပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူကို အခွံနွှာ၊ ရေဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါတယ်။ ကြက်သွန်နီကိုတော့ အခွံနွှာ ရေဆေးပြီးတော့ အကွင်းလိုက် လှီးထားပါတယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း အညှာချွေ၊ ရေဆေးပြီးတော့ ခပ်ပါးပါးလေးတွေ ဖြစ်အောင် ညှပ်ထားပါတယ်။ မန်ကျည်းသီးမှည့်ကိုလည်း ရေနွေးနဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ် ဖျော်ထားပေးပါတယ်။
အားလုံး အသင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ထမင်းတွေကို အသာအယာဖွယူပြီး ပန်းကန်ကြီးကြီးတစ်ချပ်ထဲ ထည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပုန်းရည်ကြီး၊ ဆား၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ မန်ကျည်းနှစ်၊ လှီးထားတဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဟင်းချိုမှုန့်၊ နှမ်းဆီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်တို့ကို ထည့်ပြီး အားလုံး သမအောင် နယ်ပေးပါတယ်။ အရသာကတော့ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်။(ချဉ်ငံစပ်လား၊ အဆိမ့်သုပ်လား၊ မိမိစိတ်ကြိုက် ထည့်ပါနော်)
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းသုပ်လေး ရပါပြီနော်။ ပြီးရင်တော့ အသုပ်ကို ပန်းကန်လေးတစ်ချပ်ထဲထည့်၊ ပြီးတော့ ဘဲဥကြော်ကတော့ ကိုတာစနစ်ပဲနော်၊ တစ်ယောက်တစ်လုံး၊ အသီးအရွက်ကတော့ စိတ်ကြိုက်သာထည့်စား။ အရမ်းလိုက်ဖက်တယ်နော်။ ဂျူးမြစ်လေးက တကျွတ်ကျွတ်၊ ပင်စိမ်းလေးက ရှိန်းရှိန်းမွှေးမွှေးလေး၊ မုန်လာဥနီလေးက ချိုချိုလေးနဲ့ အရမ်းကို အရသာပြည့်စုံလှတဲ့အပြင် အသီးအရွက်တွေလည်း စုံလင်လှတဲ့အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်စေပါတယ်နော်။
ဟင်းခါးအတွက်ကတော့ ဗူးသီးဟင်းခါးထဲကို ကြာဇံလေးခပ်ထားတဲ့ ဟင်းခါးလေးပါနော်။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ဗူးသီး၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ကြာဇံ၊ ငါးပိစိမ်းစားအနည်းငယ်၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်တို့ပါနော်။ ဗူးသီးကို အခွံနွှာ၊ ရေဆေးပြီး ခပ်ပါးပါးလေးတွေ လှီးထားပါတယ်။ ကြာဇံကို ရေစိမ်ထားပါ၊ ပြီးရင် လေးလက်မ အရှည်လောက် ရအောင် ဖြတ်ထားပေးပါ။ ပုစွန်ခြောက် လက်တစ်ဆုပ်ကို မညက်တညက်ထောင်းပါတယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူကို ဓားပြားရိုက်ပါတယ်။ အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အိုးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်၊ ပုစွန်ခြောက်မှုန့်၊ ငါးပိစိမ်းစား၊ ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါနော်။ ဟင်းခါးရည် ပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုရင် ဓားပြားရိုက်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူပြီး ဟင်းရည်နည်းနည်းကျအောင် တည်ပေးပါ။ ပြီးရင် ဗူးသီးနဲ့ ကြာဇံကိုထည့်၊ ဟင်းအိုးအဖုံးအုပ်ပြီး တည်ပေးပါ။ ဟင်းအိုး ပွက်ပွက်ဆူလာရင် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေး ခပ်လိုက်ပြီး အရသာ အပေါ့အငံကိုမြည်း၊ လိုအပ်တဲ့အရသာကို ထပ်ဖြည့်ပြီး ဟင်းအိုးကို မီးဖိုပေါ်ကနေ ချလိုက်ပါနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင် အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ ဗူးသီးဟင်းခါးခါး ပူပူလေး ရပါပြီနော်။
အချိုပွဲအတွက်ကတော့ ဆားငန်သီး ကျောက်ကျောလေးပေါ့နော်။ အာဂါးကျောက်ကျော အပြာရောင် အထုပ်ကို သုံးထားပါတယ်။ ကျောက်ကျော (၁) ထုပ်ကို သကြား ၂ဝ ကျပ်သား၊ ဆားငန်သီးအနှစ် လက်ဘက်ရည် ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးခွဲ၊ ရေသန့် တစ်လီတာခွဲတို့ ထည့်ပြီး ကျိုပါတယ်နော်။ ၂၅ မိနစ် လောက်ပဲ အချိန်ကြာပါတယ်နော်။ ကျောက်ကျောကို မလှီးရဘဲ တစ်လုပ်စာလေးတွေ အသင့်ဖြစ်ရအောင် ပုံစံခွက်လေးထဲ ထည့်ပြီး ခဲပါတယ်နော်။ ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂ဝ လောက်ဆို ကောင်းကောင်းခဲပါပြီနော်။ ဒါကတော့ အအီပြေ ကျောက်ကျောလေးပေါ့နော်။
နောက်ဆုံးပိတ်ကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာထဲမှာ သူမပါရင် မပြီးတဲ့ ပွဲတိုင်းကျော် လက်ဘက်နှပ်လေးပါနော်။ ဒီတစ်ခါတော့ ချင်း(ဂျင်း)အချဉ်နှပ်လေးကိုပါ ထည့်ပေးထားတယ်နော်။
ကျွန်မချစ်သော မောင်နှမများ၊ ကျွန်မနဲ့ အနေနီးကပ်စွာ မနေရပေမယ့် ကျွန်မမွေးနေ့မှာ မောင်နှမအားလုံးကို ကျွေးချင်ပါတယ်။ အပြင်မှာ တွေ့ဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဘလော့ဂ်ကနေပဲ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကို စေတနာအပြည့်နဲ့ ကျွေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးတဲ့ ၀ိုင်းတော်သားများအားလုံး၊ ကျွန်မမွေးနေ့ အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတွေ ချွေပေးကြတဲ့ ချစ်သော မောင်နှမများအားလုံးကို ကျွန်မအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ တကယ့်ကို လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲကြီး ကြည်နူးရတာပါ။ ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်ရတယ်။ အပြင်မှာ တကယ့်ကို တွေ့ကြရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။ ချစ်သော မောင်နှမများ အားလုံးလည်း ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။
အဲ့့့  မေ့လို့့့  ထမင်းသုပ်ပန်းကန်နဲ့ ဟင်းချိုပန်းကန်လေးက လုလု မတ်လတုန်းက ဂျပန်သွားတုန်းက မမဝါ က အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးထားတာ။ ကြုံတုန်းကြွားတာပါနော်။ ဆရာတစ်ယောက်က ပြောတယ်။ သမီးရဲ့ recipe ကို နာမည် ဘယ်လိုပေးမလဲတဲ့။ အားလုံးက ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါတယ်။ ကိုရီးယားပဲခေါက်ဆွဲကို ကျာကျာမြောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။ အခု recipe ကို လာလာပြောင်တဲ့လေ။ လာသမျှ အကုန်ပြောင်အောင် စားကြလို့တဲ့လေ။ တော်တော်နောက်ကြတယ်နော်။
subuueain August 14, 2009 at 6:06 PM
ဝိုးးးးးးးး မိုက်တယ်မမလုရေ။ ပျော်စရာကြီး။ လက်ဖက်နှပ်စားသွားတယ်နော်။အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ မမရေ။ မမလုမွေးနေ့ ကို ဘလော့ပေါ်ကပဲ စားသွားတော့တယ် :))
WWKM August 14, 2009 at 6:37 PM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမငယ် လုလုရေ။
မျက်နှာချိုချိုလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သဘောကောင်း
တဲ့ ညီမလေးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အချိန်လေးတွေကို သတိရ
တိုကျိူတာဝါကြီးမှာ ဆုံခဲ့တဲ့ရက်ကို လွမ်းနေမိပါတယ်။
khin oo may August 14, 2009 at 6:41 PM
လာစားသွားတယ် လုလု ဘာလက်ဆောင်ပေးရရင်ကောင်းမလဲ။ အရင်စားလိုက်ဦးမယ်နော်။
nu-san August 14, 2009 at 6:50 PM
မမလုရေ.. အဟီး.. ဒီတခါတော့ တကယ် မမ ဖြစ်သွားပြီ.. :D
မမလုမွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ဟင်းချက်နည်းအသစ်တွေလည်း မကြာ မကြာ ချက်ကျွေးနိုင်ပါစေ...
ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းစားချင်တယ် မမလုရေ.. ဒီစာဖတ်ရင်း သွားရည်ကျနေရတယ်.. နောက်တပတ် ပိတ်ရက်ဆို လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်.. ဒီတပတ်က လဖက်ထမင်းလုပ်စားရမှာမို့.. :)
:P August 14, 2009 at 7:05 PM
Yu Ya August 15, 2009 at 5:34 AM
Happy Birthday ပါ မလုလု ခင်ဗျာ။
လသာည August 15, 2009 at 9:20 AM
မလုက ဂျပန်လာသွားတာလား။ မသိလိုက်ဘူး။ သိရင် လာငေးတယ်။ အရမ်းတော်ပြီး စိတ်ထားဖြူစင်သူလေးမိုလို့ အရမ်းကိုတွေ့ချင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ကျွေးတာအားလုံးစားသွားတယ်နော်. စိတ်ကူးနဲ့လေ။ မလု./၃၅နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သာယာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ..။ ဆန္ဒခပ်သိမ်း ပြည့်စုံအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့
Anonymous August 15, 2009 at 3:34 PM
ချစ်သော မမ လု
မမ ချစ်တဲ့ မိသားစုနဲ့
Anonymous August 15, 2009 at 4:35 PM
Happy Birthday! Whenever we want to haveadelicious food, we read yours. Thanks in deed.
ကျောပိုးအိတ် August 16, 2009 at 9:08 AM
TKLinn August 16, 2009 at 7:40 PM
Happy Birthday မမလုလု..
ရွှေဂျမ်း August 16, 2009 at 10:50 PM
Happy belated Birthday ပါ မလုလု။
ဘလော့ပေါ်ကနေ စားချင့်စဖွယ်ဟင်းလေးတွေ စုံနေအောင် အမြဲ ချက်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခုလည်း ပုန်းရည်ကြီးထမင်းသုပ်ဆိုတာလေးကို လုပ်စားကြည့်ဦးမယ်။ ပုန်းရည်ကြီးသုပ်နဲ့ ထမင်းပဲ စားဖူးတယ်။ ထမင်းသုပ်လို လုပ်မစားဖူးဘူး။း)
ဇော် August 17, 2009 at 5:39 AM
လက်ဖက်ဆိုပဲ။ စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်အောင် တူ တိတ်လုပ်တာပဲ။ ဟွင့်။ အပီကို ဆွဲတာ ဘာရမလဲ။ ဟီးးး။ =P
မိုးကောင်းသူ August 17, 2009 at 8:06 AM
ပုံရည်ကြီး ထမင်းသုပ် ကြိုက်မှကြိုက်။ ဗူးသီး ဟင်းခါးလဲ ကြိုက်တယ်။ လက်ဖက်သုပ်ကတော့ ပြောနေစရာမလိုအောင်ကြိုက်တယ်နော်။ ကဲ နောက်ဆုံးပိတ် ကျောက်ကျောလေးစားပါတယ်။
Anonymous August 17, 2009 at 1:34 PM
Moe Cho Thinn August 18, 2009 at 4:13 AM
Happy Birthday ပါ ညီမလေး လုလုရေ..
ပုန်းရည်ကြီး ထမင်းသုတ်တဲ့၊ ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး။ တကယ့်ကို လက်ဖြစ်တဲ့ ဟင်းချက်တော်တဲ့ လုလု ကို မြင်ဖူးချင်လိုက်တာ။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ ချစ်သူ ခင်သူတွေနဲ့ တပျော်တပါး ဆင်နွှဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ညီမရေ..
ဏီ(န်)ကင်း August 18, 2009 at 9:06 PM
လုလု August 19, 2009 at 7:50 PM
မွေးနေ့မှာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးကြတဲ့ မောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်။
ရူးတယ်လို့ ဆိုချင်ဆို့့့  အခုရေးပေးတဲ့အမှတ်တရလေးတွေကို ပရင့်ထုတ်ပြီး သိမ်းထားတယ်သိလား။
ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ဖတ်ကြည့်၊ ပြုံးစိစိဖြစ်၊ မနက်မိုးလင်းရင်တစ်ခေါက် ဖတ်ကြည့်၊ ပီတိဖြစ်၊ အဲ့ဒီလို ရူးနေတာ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ တစ်နေ့မှာ ဆုံနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
ချစ်သောမောင်နှမများအတွက်လည်း ကျွန်မတတ်သလောက် ဟင်းများကို ကြိုးစားချက်ပြုတ်ပြီး
လိုအပ်တာများရှိခဲ့ရင်လည်း ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်၊ အကြံပြုနိုင်ပါတယ်နော်။
ライブチャット December 13, 2009 at 8:54 AM
スタービーチ December 17, 2009 at 8:41 AM
女に生れて来たからには！！ December 19, 2009 at 7:44 AM
グリー December 21, 2009 at 7:37 AM
SM度チェッカー December 22, 2009 at 8:25 AM
リッチセックス December 23, 2009 at 8:04 AM
神待ち December 24, 2009 at 8:26 AM
友達募集中 December 26, 2009 at 7:20 AM
玉の輿度チェッカー December 29, 2009 at 7:53 AM
リア友 December 31, 2009 at 7:04 AM
お家遊びに来てくれる人いないかなぁ？ January 2, 2010 at 6:12 AM
神待ち January 3, 2010 at 7:47 AM
家出掲示板 January 4, 2010 at 6:52 AM
名言チェッカー January 5, 2010 at 7:55 AM
モバゲー January 7, 2010 at 5:55 AM
円倶楽部 January 8, 2010 at 7:49 AM
旦那以外とエッチしたい January 9, 2010 at 8:22 AM
神待ち January 10, 2010 at 8:07 AM
出会い January 12, 2010 at 8:26 AM
熟女 January 13, 2010 at 8:24 AM
mコミュ January 14, 2010 at 8:36 AM
天然娘 January 15, 2010 at 8:27 AM
真剣に向き合ってはくれませんか？ January 16, 2010 at 6:00 AM
スタービーチ January 17, 2010 at 7:33 AM
神待ち January 18, 2010 at 8:08 AM
右脳左脳チェッカー January 19, 2010 at 7:40 AM
セレブ January 20, 2010 at 7:50 AM
スタービーチ January 21, 2010 at 8:37 AM
高級セレブ January 29, 2010 at 7:48 AM
メル友 January 30, 2010 at 7:37 AM
ツイッター January 31, 2010 at 8:14 AM
恋愛のこと教えてねヽ(^◇^*)/ February 13, 2010 at 8:11 AM
モバゲー February 14, 2010 at 9:10 AM
スタービーチ February 25, 2010 at 1:04 AM
mコミュ February 28, 2010 at 8:10 AM
競馬予想 March 19, 2010 at 6:36 AM
スタービーチ March 22, 2010 at 9:05 AM
友達 March 27, 2010 at 6:33 AM